Chii chinonzi SIM Kadhi uye Nei Ndichichida? Hechino chokwadi! - Zvimwe
iphone 8 plus haibhadhare
ipad kuratidza hakuzo tenderere
iphone 5s wont kuchaja kana kubatidza
Zvinoreva nyati mubhaibheri
nei iphone yangu ichiramba ichitsvaga
Chii chinonzi SIM Kadhi uye Nei Ndichichida? Hechino chokwadi!
SIM (Subscriber Identity Module) kadhi ndechimwe chezvikamu zvakakosha zvefoni yako. Pasina iyo, foni yako yaisazokwanisa kubatanidza kune yako isina waya sevhisi yenhare mbozha. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura kwauri chii chiri sim kadhi, ini ndinokuratidza maitiro ekutsvaga yako sim sim khadi uye ndikubatsire iwe kubvisa iyo sim kadhi kubva mufoni yako .
ndinodhinda sei kubva ku iphone yangu
Chii chinonzi SIM kadhi?
SIM kadhi ine basa rekuchengetedza yakawanda data iyo inobatsira yako isina waya opareta kusiyanisa foni yako kubva kune mamwe mafoni uye zvishandiso pane yayo network. Makiyi ekupa mvumo efoni yako akachengetwa paSIM kadhi kuitira kuti foni yako ive nekwaniso yedata, meseji uye nhare dzekufona idzo hurongwa hwako hwenharembozha hunopa iwe. Yako nhamba yefoni inochengetwawo paSIM kadhi.
Chaizvoizvo, iyo SIM kadhi ndiyo inobvumidza foni yako ku kuwana uye kushanda kune yako isina waya sevhisi webasa network .
SIM kadhi yangu iripi?
Iko iko SIM kadhi kunoenderana nefoni yauinayo. Kazhinji yenguva, iyo SIM kadhi iri mutray pane kumucheto kwefoni.
Mune maPhones mazhinji, iyo SIM kadhi iri mudiki tireyi kumucheto kurudyi kwefoni. Pane iyo Samsung Galaxy S9, iyo SIM kadhi tireyi iri padanho repamusoro pefoni. Kana iwe usingakwanise kuwana iyo SIM kadhi tireyi pane imwe yemipendero yefoni yako, kukurumidza kutsvaga kweGoogle kuchakubatsira kuiwana.
Sei mafoni Aine SIM Kadhi?
Kubatanidza foni yako kune yako isina waya sevhisi webhusaiti network haisi iyo yega chikonzero nei nhare dzichine SIM kadhi SIM makadhi anoita kuti zvive nyore kusimba kuendesa yako foni nhamba kubva kune imwe foni kuenda kune imwe.
Naizvozvo, kana iwe wakatenga foni nyowani, zviri nyore kwazvo kuti iwe ubvise iyo SIM kadhi kubva kune yako yekare foni uye kuiisa mune iyo nyowani!
Ndinobvisa sei SIM kadhi?
Kuti ubvise SIM kadhi kubva mufoni yako, unofanirwa kuvhura iyo SIM kadhi tireyi. Iyi tireyi inogona kunetsa kuvhura nekuti iri diki. Kana iwe ukashanyira iyo Apple Chitoro kana yeanoshanda chitoro chitoro, iwe uchaona kuti ivo vanovhura iyo SIM kadhi tireyi neanoshamisira SIM kadhi kubvisa mudziyo .
Nekudaro, vanhu vazhinji havana zvishandiso zvekubvisa SIM kadhi kumba. Panzvimbo iyoyo, iwe unogona kuvhura iyo SIM kadhi tireyi ine yakatwasuka pepa clip. Tarisa uone vhidhiyo yedu yeYouTube kana uchida rubatsiro nazvo buritsa SIM kadhi kubva kufoni yako !
Gadzirisa Zvakajairwa SIM Kadhi Matambudziko pane yako iPhone
SIM makadhi akanaka, asi haagare achishanda nemazvo. Tine zvimwe zvinyorwa zvakanaka zvekukubatsira kugadzirisa matambudziko akajairika aungave uine yako SIM kadhi SIM.
Zvaunofanira kuita kana yako iPhone ikati 'Kwete SIM'
Zvaunofanira kuita kana yako iPhone ikati 'invalid SIM'
Nei iPhone Yako Ichiti 'SIM Yako yakatumira meseji'
SIM makadhi akagadzira SIMPle
Ndinovimba chinyorwa ichi chinojekesa chero nyonganiso yaungave nayo pamusoro peSIM makadhi. Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo yaungade kuti tipindure, inzwa wakasununguka kusiya mhinduro pazasi.
nei bhatiri rangu riri jena pane yangu iphone 6